एउटा चलचित्र फ्लप भए दर्शक र मिडियाले गाली गर्छन् (अन्तरवार्ता) | Sarathi News
एउटा चलचित्र फ्लप भए दर्शक र मिडियाले गाली गर्छन् (अन्तरवार्ता)
November 30, 2014 | 1:28 pm
बलीउडमा इमान्दार अभिनेताको पहिचान बनाएका अजय देवगन अभिनयको साथ साथै निर्माणमा पनि हात हालेका छन् । यू मी और हम पछि उनी चलचित्र शिवायको निर्माण गर्ने तयारीमा छन् । तर यतिबेला भने उनी आफ्नो अभिनय रहेको चलचित्र एक्शन ज्याक्शनको प्रचारमा ब्यास्थ छन् । प्रभू देवाको निर्देशन रहेको यो चलचित्र आगामी शुक्रबारबाट बिश्वभर प्रदर्शनमा आउने छ । चलचित्रमा अजयको अलवा सोनाक्षी सिन्हा, यामी गौतम, मनस्वी ममगई र कुणाल रॉय कपूर को पनि मुख्य भूमिका रहेको छ । प्रदर्शनको संघारमा रहेको चलचित्र एक्शन ज्याक्शनको सेरोफेरोमा रहेर बलीउड भाष्करले उनीसँग लिएको अन्तरर्वाताको अंश
चलचित्र प्रमोशनमा पहिलोपटक यतिधेरै खुलेर लाग्नुभएको छ नी ?
म सधै कम बोल्छु । मिडियामा पनि यतिसाह्रै आउन मन लाग्दैन । साथीभाईसँग रहँदाको कुरा अलग भयो तर सार्वजनिक ठाँउमा धेरै समय सुन्ने र कम समय बोल्ने बानी छ मेरो । जहाँसम्म एक्शन ज्याक्शनको प्रचारको कुरा छ , निर्देशक प्रभू देवाको म भन्दा पनि कम बोल्ने बानी छ । त्यसैले म बाध्य भएर यो चलचित्रको बारेमा बोलीरहेछु । आफ्नो ठाँउबाट सक्दो चलचित्रको प्रचार गरिरहेको छु ।
तपाईको पछिल्लो प्रदर्शनमा आएको चलचित्र सिंघम रिटन्र्सले १४० करोडको कारोवार गरेको थियो । के एक्शन ज्याक्शनलाई त्यो भन्दा बढीको व्यापार गर्न दवाब छ ?
सिंघम रिटन्र्सलाई सबैले मन पराइदिनुभयो , यो राम्रो कुरा हो तर कुरा सय करोड र दुईसय करोडको होइन की चलचित्र कस्तो बन्यो ? दर्शकले रुचाए की रुचाएनन् भन्ने हो । चलचित्रको बजेट आजकल निकै बढेको छ । यस हिसाबले पहिले सय करोडको कारोबार गर्दा जति खुशी मिल्थ्यो त्यति खुशी आजभोली मिल्दैन । किनकी चलचित्रको कुल बजेट नै सय करोडको हाराहारीमा हुन्छ । त्यो हिसाबले चलचित्र राम्रो बनाउनुको साथ साथै कारोबार पनि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ अहिले ।
प्रत्यक शुक्रबार बक्शअफिसको जानकारी राख्नुहुन्छ ?
अबश्य राख्छु । यो मेरो विजनेस हो । चलचित्रको राम्रो ओपनिङ किन भएन ? के कस्ता गल्ती भएका रहेछन् ? कुन कुरा बदल्न आबश्यक छ जस्ता कुराहरु बुझन पनि बक्श अफिसको फलो गर्नै पर्छ । कुन चलचित्रले कस्तो कारोबार गर्यो भन्ने शहि आँकडा थाहा पाउन पनि बक्शअफिसको साहरा लिनै पर्छ ।
प्रतिद्धन्दीको आकलन गर्न पनि बक्शअफिसको साहरा लिनु जरुरी छ ?
दुईवटा कुरा यसमाmहुन्छन् । पहिलो त जे कुरामा रुची छ त्यो कामलाई सघाउने कुराको ज्ञान राख्नै पर्दछ । कुन चलचित्र कस्तो बनेको थियो र कस्तो व्यापार गर्यो भन्ने जीज्ञासा हुन्छ नै । अर्को कुरा विजनेशको स्ट्रेटजी बनाउन पनि यी बक्श अफिसको ज्ञान हुनु पर्छ । बिदाका दिनहरुमा कलेक्शन आक्रमक हुन्छ भने अहिलेको सिजनमा व्यापार कम हुन्छ । किनकी यो बिहेको सिजन हो । मेरो अघिल्लो चलचित्र सिंघम रिटन्र्स दिपावलीको अवशरमा रिलिज भएको थियो । त्यो राम्रो सिजन भएकोले व्यापार पनि आक्रमक नै भयो । तर यो सिजनमा चलचित्रले आक्रमक व्यापार नगरे पनि बिस्तार बिस्तार व्यापारले गति लिनेछ भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।
अपसिजनको रिलिजले एक्शन जैक्शनको बिजनेश कम होला ?
यो चलचित्रले कुनै छुट्टीको दिन पाएको छैन । तर सोलो रिलिजको अबशर पाएकोले बिजनेस राम्रै गर्छ भन्ने लागेको छ । अर्को हप्ता पनि कुनै ठूला बजेटका चलचित्र रिलिज हुने छैनन् । राम्रा चलचित्रहरुले तेश्रो हप्ता सम्म पनि दर्शक पाउने गरेकोले चलचित्रको बिजनेस राम्रै हुन्छ होला ।
आफ्नो निर्माण रहने चलचित्रमा निर्देशकलाई कत्तिको हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ ?
निर्माता भएपछि चलचित्रका संगीत, कहानी, संबाद सबैमा ध्यान त दिन्छु नै । अभिनेताको हैसियतले राय दिने कुरा भयो । रिलिज भन्दा पहिले फाइनल कट अबश्य हेर्ने छु । यसलाई हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन । यसले चलचित्र राम्रो बन्न सघाउदछ ।
के संगीत राम्रो भए चलचित्रले राम्रो कमाई गर्छ ?
हाम्रो कल्चर डान्स र म्यूजिकको हो । कुनैपनि चाडपर्वमा डान्स हुने नै हुँदा म्यूजिक महत्वपूर्ण पाटो हो । जो कोहिले पनि चलचित्र बनाउदै छ भने म्यूजीक हिट बनाउने कोसिस गर्छन् । राम्रो संगीतले भेरै दर्शकलाई चलचित्रसँग जोड्न मद्दत गर्छ । मेरा यस अघिका सफल चलचित्रको संगीत पनि राम्रौ थिए ।
सलमान खान, शाहारुख खान र आमिर खान क्रमश ईद, दिपावली र क्रिसमशलाई आफ्नै चलचित्र तयार गर्छन् । तपाईको तारिख चाहि कुन हो ?
जब चलचित्र तयार हुन्छ त्यो नै समय मेरो तारीख हो । कुनै चाडपर्वलाई भनेर म कहिल्यैं काम गर्दिन ।
अब पनि साथी भाईकै क्याम्पमा मात्र काम गर्नुहुन्छ ?
यसरी अब चल्दैन भन्ने सोच आएको छ । एउटा गलत चलचित्रमा काम गरे दर्शक र मिडियाले विरोध गर्छन् । साथी भाइको पनि राम्रो स्क्रीप्टमा अफर आए काम गर्छु ।
अमगामी दिनहरुमा तपाईको स्टारडम कस्तो देखिएला ?
स्टारडम कहिल्यै खत्तम हुँदैन । राम्रो कामको सबैले सधै याद गरिरहन्छन् । जब म १९ बर्षको थिए, तेतीबेला म काममा सिरीयस थिइन । कुनै चुनौती थिएन । चलचित्र बन्थ्यो, रिलिज हुन्थ्यो । मलाई कुनै फरक पर्ने थिएन । तर अहिले त्यस्तो हुँदैन । एउटा चलचित्र फ्लप भयो भने पनि दर्शकको नजरमा नराम्रो भइन्छ । त्यसैले चलचित्र छानेर सिमितमा मात्र काम गर्ने गरेको छु । अब बर्षमा एउटा मात्र चलचित्रमा काम गर्ने सोच छ । चलचित्र निर्माणमा पनि हात हालेकोले अब बाहिरी चलचित्रमा कमै काम गर्नेछु ।